Ny lalao fahavelomana efatra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fisafidianana ny lalao misy amin'ny fitaovana Android dia mihanaka isan'andro. Lalao vaovao misy karazany maro no tonga. Zavatra manolotra safidy maro hafa azo isafidianana. Ny karazana mety hahaliana ny maro dia lalao velona. Izy io dia karazana feno hetsika ary tokony hampiasa izay tsara indrindra vitantsika isika mba ho tafavoaka velona.
Raha tianao ity karazana lalao ity izay misy hetsika sy adrenaline be dia be. Saingy mazava tsara ny tena tanjona lehibe: tsy maintsy tafavoaka velona amin'ny sarany rehetra isika. Ny fisafidianana an'ity karazana lalao ho an'ny Android ity dia nitombo be. Avelanay anao ny tsara indrindra misy ankehitriny.
Amin'izany fomba izany, raha liana amin'ny fanandramana lalao velona ianao dia mora azo atao amin'ny findainao Android. Ankoatr'izay, tsy mila mandany vola. Tsara homarihina ihany koa fa ireo lalao rehetra ireo dia manana sary tsara manampy antsika hiditra amin'ilay tantara. Andininy manan-danja lehibe ho an'ny mpilalao maro. Lalao inona avy no nahatonga an'io lisitra io?
1 Raft Survival: Farany
2 Andro farany eto an-tany: Famindrana
3 Nosy velona: Mivoatra
4 Toeram-piadiana farany: tafavoaka velona
Raft Survival: Farany
Manomboka amin'ity lalao ity izay mitondra antsika amin'ny traikefa an-dranomasina izahay. Mila misambotra ireo zavatra hitantsika mitsingevana anaty rano isika. Amin'ireo zavatra ireo no ahafahantsika manangana kojakoja velona hihaza ary hamelombelona antsika. Saingy, misy ny fandrahonana lehibe izay hahatonga ny fiainantsika ho sarotra kokoa. Satria feno antsantsa ny rano. Ka mila mitandrina tsara isika. Satria noana be izy ireo.
Andro farany eto an-tany: Famindrana
Faharoa, mahita ny iray amin'ireo lalao velona malaza indrindra eto amin'ny Play Store isika. Lalao manambatra singa maro samihafa izy io, amin'ny karazany maro karazana. Saingy, mazava ny asantsika, tsy maintsy tafavoaka velona amin'ny sarany rehetra isika. Tsy maintsy hanao izany isika miatrika fanafihana zombie raha mandehandeha eny amin'ny faritra misy aretina ianao. Ankoatr'izay dia mila mahazo sakafo isika vao afaka mandroso sy mijanona ho velona. Manome antsika ny safidy hilalao irery na amin'ny ekipa iray ny lalao. Safidy tsara raha mitady lalao misy hetsika be ianao.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
Andro farany eto ambonin'ny tany: fahavelomana
Nosy velona: Mivoatra
Amin'ity lalao fahatelo amin'ny lisitra ity dia manova tanteraka ny sehatra isika. Nandeha tany amin'ny nosy efitra iray izahay ary tany no niafarany. Araka ny mety ampoizinao, ny asany lehibe indrindra dia ny tafavoaka velona eto amin'ity nosy ity. Noho izany, tsy maintsy ataontsika ireo zavatra izay efa hitantsika tamin'ny sarimihetsika. Tsy maintsy manangana fialofana azo antoka isika ary miaro antsika amin'ny orana sy ny hatsiaka. Manaova afo, mihaza ary misoroka olana ara-pahasalamana na ratra. Na izany aza, tsy ho mora foana izany satria hiatrika fanamby isan-karazany isika mandritra ny lalao.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Nosy velona: EVO 2
Toeram-piadiana farany: tafavoaka velona
Farany, mahita ny iray amin'ireo lalao mahaliana indrindra amin'ity karazana ity isika. Amin'ity tranga ity dia eo amin'ny nosy iray isika miaraka amina mpilalao 39 hafa. Samy nariana teto amin'ity nosy ity daholo isika ary tsy maintsy tafavoaka velona daholo. Saingy, tsy mitondra na inona na inona isika. Noho izany, tsy maintsy mandroso isika ary mahatratra ireo singa manampy antsika ho tafavoaka velona amin'izany tsy misy amin'ireo mpilalao hafa afaka mandresy antsika. Tsy maintsy mihaza isika, nefa any amin'ny faritra azo antoka foana. Koa satria ny sisa amin'ireo mpilalao dia ao anatin'ny tarehin-javatra faran'izay mafy koa.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity ho an'ny Android. Na dia, toy ny amin'ny lalao ambiny aza dia mahita fividianana sy dokam-barotra ao anaty isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao velona tsara indrindra ho an'ny Android
Ny LG V30 miloko mavokely misy any Espana manomboka rahampitso
Ny fampiharana virtoaly tsara indrindra ho an'ny Android